3190 Tropical North Queensland shaqooyinka dalxiiska ayaa lumin doona
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » 3190 Tropical North Queensland shaqooyinka dalxiiska ayaa lumin doona
Wararka Australia • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ku xidh dabeecadda meel aan ka duwanayn meel kasta oo kale - oo ay qarisay reef oo ay dabooshay kaymaha roobka, soo dhawaynta ugu diirran adduunka ayaa ku sugaysa.
Kani waa farriinta ku taal bogga Tropical North Queensland Board Tourism Board, oo kor u qaadaya Great Barrier Reef iyo Cairns ee Australia.
3,150 kale oo ah shaqooyinka dalxiiska ee Tropical North Queensland ee Australia ayaa lumin doona Kirismaska ​​oo hoos u dhigaya shaqaalihii dalxiiska ilaa kala bar cabirkiisii ​​hore, sida lagu sheegay cilmi-baaris cusub oo ka timid Madasha Dalxiiska iyo Gaadiidka (TTF).
Dalxiiska Tropical North Queensland (TTNQ) Madaxa Fulinta Mark Olsen ayaa sheegay in dalxiiska uu shaqaaleysiiyay 15,750 shaqaale waqti-dhiman iyo waqti dhiman ah, iyadoo qarashka dalxiiska dadban, ay taageereen wadar ahaan 25,500 oo shaqo kahor masiibada gobolka Cairns.
Markay ahayd Luulyo 2021, waxaan luminay 3,600 shaqaale joogto ah, xitaa iyadoo ay taageerayaan JobKeeper iyo suuq gudaha ah oo soo noqonaya, ”ayuu yiri Mr Olsen.
“Gobolku wuxuu kobciyey shaqaalihiisii ​​dhammaan silsiladda sahayda oo dhan oo diyaar u ah jiilaal mashquul ah, laakiin hadda shaqaalahan cusub, oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo ka socda warshadaha dalxiiska, oo tababar ku jiray bilo ayaa loo sheegayaa inay shaqo kale raadsadaan.
“Dawladdu waxay u baahan tahay inay fahamto sida ay saamayn weyn ugu yeelan doonto beesheena oo mid ka mid ah shantii shaqoba uu ku tiirsan yahay dalxiiska.”
Guddoomiyaha TTNQ Ken Chapman ayaa sheegay in taageero dakhli looga baahan yahay shaqaalaha dalxiiska oo hadda luminaya hab -nololeedkooda.
Dhegeyso doodda Waqooyiga Queensland
"Shaqaalaha istaagay oo lumiyay saacadaha shaqada sababtuna tahay qufulka aaggooda waxay awoodaan inay helaan $ 750 asbuucii lacagaha taageerada masiibada Covid ee Centrelink," ayuu yidhi.
“Laakiin shaqaalaha dalxiiska ayaa istaagay sababta oo ah qufulka meelo kale oo dalka ka mid ah ayaa sababaya in ganacsadaha loo shaqeeyaha laga xiro macmiilkiisa ma heli karo taageero dakhli.
"Tani waa masiibo bini'aadan oo gebi ahaanba sabab u ah siyaasadda Dowladda."
Maamulaha Rugta Ganacsiga ee Cairns Patricia O'Neill ayaa sheegtay in luminta shaqooyinka laga dareemay dhammaan warshadaha, gaar ahaan tafaariiqda oo 61% hoos u dhacday shaqooyinka tan iyo sannad -maaliyadeedka hore.
Maamulaha shirkadda Advance Cairns Paul Sparshott ayaa sheegay in awoodda dhaqaalaha gobolka ee soo kabashada ay aad u yaraan doonto haddii shaqaalaha xirfadda leh ay ku waayaan waaxda dalxiiska iyo soo dhoweynta.
“Waxaa jiri doona dhibaatooyin baaxad leh. Markay suuqyada dalxiisku aad u saameeyaan waxay u gudubtaa warshado kale oo saameeya dhaqaalaha gobolka oo dhan, ”ayuu yidhi.
Mr. Olsen ayaa yiri Tropical North Queensland is oo sii ahaan doona, mid ka mid ah gobollada ay saameynta ugu badan ku yeelatay Australia, iyo aragtida warshadaha dalxiiska ayaa ahaa mid xun.
“Macaamiil la'aan, meheradduhu ma haystaan ​​wareejin ay ku sii haystaan ​​shaqaalahooda aadka u xirfadda badan, kuwaas oo qaarkood ay sannado tababar ku qaateen meelo khaas ah si ay u noqdaan kuwa boodboodayaasha ah, kuwa quusiya, iyo boodboodayaasha bixiya khibradaha dalxiiska ee gobolka.
“Gobolkeennu wuxuu haystay 27 maalmood oo toos ah iyada oo aan wax saamayn ah ku lahayn xiridda suuqyada muhiimka ah ee gudaha 18kii bilood ee la soo dhaafay.
“Waqtigaas bishii Maajo wuxuu ahaa kii ugu mashquulka badnaa ee gobolka Cairns iyo Great Barrier Reef uu ahaa tan iyo ka hor masiibada maadaama aan nahay meesha ugu badan ee Googled -ka ah ee loogu talagalay dalxiisayaasha Australia.
“Si kastaba ha ahaatee, saamaynta joogsiga/bilowga ee xannibaadaha koonfureed ee xiraya meesha laga aado suuqyada muhiimka ah ayaa ku adag ganacsiyada inay maareeyaan, gaar ahaan heerarka shaqaalaha.
“Waxaan joognaa toddobaadkii lixaad ee booqashooyinka sida xorta ah u dhaca oo in ka badan 15 milyan oo Australiyaan ah ay xiran yihiin.
“Ganacsiyada badankood waxay ku shaqeeyaan wax ka yar 5% dakhligooda caadiga ah, iyo ballansashada hore ayaa hoos u dhacaya hoteellada ilaa 15-25% dadka deggan iyo in ka badan $ 20 milyan oo dhacdooyinkii dib loo dhigay Luulyo iyo Ogosto.
"Waxaan heysanaa doonyaha la baxaya lix rakaab oo kaliya aiyo afar shaqaale iyo inta badan goobahu waxay ku jiraan saacado ganacsi oo xaddidan, halka kuwo kalena ay galeen hurdo la'aan.
"Macaamiishu waxay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabsan lahaayeen ballan -qaadyada safarka ee gobollada dhexe iyo meel ka durugsan guriga, iyadoo ku dhawaad ​​60% dadka socotada ah ee Australia aysan u badnayn inay ka gudbaan soohdintooda Gobolka sida ku cad xogta cusub ee Golaha Warshadaha Dalxiiska ee Queensland (QTIC)."
“Iyada oo kala badh safarkayaga gudaha ah uu ka imanayo gobollada dhexe ka hor xiritaanka, xiritaanka xuduudaha ayaa sii ahaan doona mid saamayn weyn ku leh gobolkeenna.
“Iyada oo fasaxyada dugsigu soo dhow yihiin, hawlaha ololaha suuq -geynta ee TTNQ ee Sebtembar iyo Oktoobar waxay si weyn ugu tiirsanaan doonaan wada -hawlgalayaasha wakiilka socdaalka si ay isugu dayaan una siiyaan macaamiisha kalsooni ay ku ballansadaan iyagoo og in isbeddelku sii socon doono.
Xog laga helay wakaaladaha socdaalka tafaariiqda ayaa muujinaya in Cairns ay weli tahay tii shanaad ee loogu raadinta badnaa iyo kaalinta lixaad ee safarka ugu ballaadhan afartii toddobaad ee la soo dhaafay, laakiin waxaan ku soconnaa wax ka yar 25% ee baaritaannada iyo 55% ee ballansashada halkii aan markii hore Covid."